Myanmar Local News: ဒေါ်စုအပါဝင်NLDနှင့်၈၈၈၈အဖွဲ.သို.သတိပေးတိုက်တွန်းချက် ~ ဦးအေးမြင့် (လမ်းပြကြယ်)
ဒေါ်စုအပါဝင်NLDနှင့်၈၈၈၈အဖွဲ.သို.သတိပေးတိုက်တွန်းချက် ~ ဦးအေးမြင့် (လမ်းပြကြယ်)
လွန်.ခဲ.သော၂၀၀၇/၀၈ခုနှစ်ကတည်းက ဒီနှစ်ဖွဲ အထူးသတိပေးပြီးလိုအပ်ချက် နှင်. မှားနေ သည် များကို ဝေဘန်ထောက်ပြခဲ.ပါတယ်လက္ခံခြင်းမရှိ-နောက်ပြန်လှည်.ကြည်. သုံးသပ်ခြင်းမရှိပဲ--ရှေ. ဆက် လျှောက်ခဲ.တော. ယနေ. လက်တွေ.ခံစား လိုက်ရပြီ မဟုတ်လား--အချိန်မှီပြင်လို. ရပါ သေးတယ်--ဒါပေမဲ. လွယ်မည်တော. မထင်လိုက် ပါနှင်.---- ပြည်သူလူထုက-စိတ်ကုန်ပြီး လက်ပိုက် စောင့်ကြည်. နေတဲ.အချိန်မှာရှေ.ဆက်မမှားရန် လိုအပ်နေပြီ-----
(က)ကမ္ဘာသိနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာအားလုံးလက္ခံပါတယ်ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်--ခေါင်း ဆောင်ဆိုတဲ.--စကားရပ်-- ထဲမှာသတ်မှတ်ရန် စောင်.ကြည်.နေကြတာ သိထားစေချင်--- တယ်(အားလုံး လက္ခံထားတာက မြန်မာပြည်မှာလူသိများပြီး -ဒေါ်စုနှင်.၈၈ဘာပြောမလဲ- ဘာလုပ်မလဲ နားစွင်. နေသူ တွေက များတယ်--အခြားနိုင်ငံရေးသမားအားလုံးကလည်းဒိ လိုပဲလက္ခံထားကြတယ်လေ--မင်းတို. ရှေ.ဦးဆောင်ရင်လူထုလိုက်ပါလာမည်အောင်မြင် မည်လို.ယုံကြည်ထားကြတယ်--တိုင်းပြည်ရဲ. ခေါင်းဆောင်လို.မသတ်မှတ်သေးပါ)။
(ခ)မင်းတို.ကိုယုံပြီးလူထုလမ်းမပေါ်လိုက်တက်ပေးတယ်--ရွှေဝါရောင်--တော်လ်န်ရေးအထိ လေ မအောင် မြင်ဘူး-- လူထုသွေးမြေကျတယ်(---ဒါကိုပြန်လည်မသုံးသပ်ဘူး- ဖွဲ./ပြင်ရန် လုပ်တယ် အားလုံးက ပြင်စေ ချင်တာ--စောင်.ကြည်.တယါ-- ယခုနည်းဟောင်းသုံး လုထုကိုလမ်းပေါ်တက်ခိုင်းသည်.နည်းဟောင်းက--တိုင်းပြည်ပျက် မှ-၂၀၀၈ခုနှစ်ပျက်မည်.နည်းကိုဆက်သုံးတယ်---ကပြောနှင်.အလုပ်မညီတဲ.မိန်.ခွန်းတွေ ချွေကြ တယ်။
(ဂ)၂၀၁၃အကုန်၂၀၁၄အကူးမှာ--မင်းတို.နီုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပျောက်- တိုက်ကွက်ပျောက်နေ ခဲ.တယ်--ပထမဦးဆုံး မင်းတို.ကိုပိုသိလာတယ်-- စာပေဟောပြောပွဲဇာတ်ခုံပေါ်ဇွတ်-- ပြီးတရား တက်ဟော တယ်ပြန်သုံးသပ်လေ.လာလိုက်ပါ။ နောက် လိုင်းပျောက်နေလို. ဥပဒေနားမလည်ပဲ ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေပုဒ်မ(၅၉)ကိုစပြင်ခိုင်းတယ်-- နေမျိုးဇင်- ကိုဝင်းချိုတို.တကိုယ်တော်အဖွဲ.ကပုဒ်မ(၄၃၆)ကိုပြင်ရန် ဖေါ်ထုတ်မှ နောက်ရောယောင်လိုက်အော်တယ်
(ဃ)၈၈၈၈နောက်ပိုင်း- မင်းတို.လူထုကြားထဲမဆင်းဘူး (လူထုဟောပြောပွဲပဲလုပ်တယ်)-- မင်းတို. ကူညီလုပ်ဆောင်လိုက်လို-- လူထုထဲကဘယ်နှစ်ယောက်အခက်အခဲပြေလည်--- သွားလဲ-အပေါ်ပိုင်း နီုင်ငံရေးပဲ မင်းတို.လုပ်တတ်တယ် အောက်ခြေနိုင်ငံရေးမတတ်ဘူး-- ဒေါ်စုဟာ နိုင်ငံတကာ အသိမှတ်ပြု နိုင်ငံရေးသမား- ခေါင်းဆောင်မဟုတ်--- (ကမ္ဘာမှာ- မိန်းခွန်းအများဆုံးပြောသူပါ-ဒါပေမဲ. ပြောသမျှ တခုမျှဖြစ်မလာသူမှာလည်းဒေါ်စု)ပါပဲ-- ပြင်လိုက်ပါအချိန်မရှိတော.ဘူး--ပြုပြင်ဝေဘန်ထောက်ပြတာကို(ဘု) တယ်လို.ထင်ရင် မြောင်းထဲမရာက်ပါစေနှင်.ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။